Nigeria: Gobol laga mamnuucay haasawaha ragga iyo dumarka | Berberanews.com
Home Qubanaha Nigeria: Gobol laga mamnuucay haasawaha ragga iyo dumarka
Nigeria: Gobol laga mamnuucay haasawaha ragga iyo dumarka
Maamulka dowladda hoose ee deegaanka Rano ee goablka Kano ee dalka Nigeria, ayaa soo saaray sharci cusub oo mabnuucaya wada-sheekaysiga habeenkii ah ee u dhaxeeya ragga iyo dumarka dhalinyarada ah. Dadka haasawaha habeenkii ah laga mamnuucay waxaa sidoo kale ku jira dumarka garoobada ah.
Maamulka ayaa sheegay in sharcigaan ay u soo saareen dadka guurdoonka ah ee gobalka oo dhan si loo helo da’yar nadiif ah oo aan ka leexan hilinka haboon ee howsha guurka loo maro
Bayaan ka soo baxay guddoomiyaha dowladda hoose ee deegaanka Al-xaaji Daahiru Muxamed ayaa lagu sheegay in tallaabadaan loo qaaday si looga hortago waxyaabo dhaqan xumo ah oo bulshada ku dhex baahay iyadoo loo marayo magaca guurka. Arrintaana ayaa dhalisay muran, inkasta oo inta badan waalidiinta iyo dhalinyaradu u arkaan tallaabo dhanka wanaagsan loo qaaday.
Muxuu sharcigu sheegayaa?
Guddoomiyaha dowladda hoose ee Rano, ayaa adkeeyay in sharcigaan uu yahay lagama maarmaan sababta loo soo saarayna ay tahay in la xaqiijiyo waxbarashada wanaagsan ee dhalinyarada iyo haweenka la soo furay ama laga dhintay ee wakhtigaan.
Wuxuu sheegay in wixii hadda ka dambeeya waalidiinta iyo qaybaha kale ee bulshada la farayo inay hubiyaan in wadahadalka haasaawaha ah loo qabto qaab ku salaysan diin iyo dhaqan. Isaga oo guddoomiyuhu sheegaya cidda ay tahay inay amarkaan ka shaqeeyso ayuu yiri:”Waxaan faraynay madaxda, imaamyada iyo hay’adaha kale inay feejignaadaan oo ay ka fikiraan horumarka ka socda dalkeenna. Saraakiisha Hisba iyo booliiska iyo taliyayaasha ayaa xaqiijin doona in amarkaan la raaco.”Wuxuu intaasi ku daray in saraakiisha ciidamadu ay sameyn doonaan rondo habeenkii si loo hubiyo in dadka deegaanku ay hoggaamsameen amarka la soo saaray.
‘Uma dulqaadan doonno haweenka sharci darrada ah’
Xaakimka deegaanka Rano, Al-xaaji Mannir Tafiida Abubakar, ayaa isna sheegay in muddo dheer ay deegaanka ka jireen dhibaatooyin xagga nidaamka habeenkii ah.Sidoo kale wuxuu sheegay inay halis ugu jiraan dumarka iyo ragga deegaanka madhalaysnimo, maadama lagu kacayo falal aan wanaagsaneyn balse aanu faahfaahin ka bixin.
“Haddii ay tahay inay tagaan habeenkii, waa in loo oggolaadaa inay galaan guriga, laakiin waxaannu diidnay in albaabka lagu wadahadlo” ayuu hadalkiisa raaciyay Al-xaaji Mannir Tafiida Abubakar.
Wuxuu waalidiinta ku booriyay inay tallaabadaan ay u qaataan sixitaan isla markaana ay maamulka ku gacan siiyaan hirgalinteeda,haddii kale wuxuu ku goodiyay in waalidka iyo dhalinyaraduba gaarahaanna kuwa lagu helo Shukaansiga habeenkii ah ay la kulmi karaan ciqaab.
Xaakimka ayaa sidoo kale ugu baaqay culimada iyo guudahaan dadka deegaanka inay si wada jir ah uga shaqeeyaan sidii loo yareyn lahaa tirada carruurta ku dhalata habka aan sharciga waafaqsaneyn ama carruurta aan aabayaashood la aqoonin.”Waalidiinta waa in la xusuusiyaa mas’uuliyadda ka saaran joojinta aafadan,” ayuu yiri Tafida.
Maxay waalidiintu arrintaan ka yiraahden?
Qaar ka mid ah waalidiinta oo BBC-da u warramay ayaa sheegay in aaney sharcigaan ka soo horjeedin sababtoo ah waxaa ay sheegayaan inuu qayb ka qaadanayo in waxbarashada deegaanku ay hormarto.
Mid ka mid ah waalidiinta deegaanka Rano oo lagau magacaabo Dan Baba Wanzami, ayaa sheegay in muddo dheer ay walwalsanaayeen sidaa darteedna ay hadda arrimuhu fududaaden,isla maraakan loo baahanyahay in aabbe kasta oo magaalada ku nool uu ku raaxeysto sharcigan.
Da’yartu dhankooda maxay ka yiraahden?
Abuubakar Isyaku waa nin dhalinyaro ah oo ku nool Rano wuxuuna sheegay in sharcigan la soo saaray uu yahay mid wanaagsan.Wuxuu sheegay inuu doorbidayo wada sheekaysiga maalinta ah, oo uusan jeclayn in ilaa 12-ka saqdadhexe ee habeenkii la wado shukaansi.
Haweeney kale oo dhallinyaro ah, laguna magacaabo Maryam Sani Abubakar, ayaa sheegtay iyana in sharcigaan uu gacan ka geysan doono soo afjaridda ragga khiyaanada badan. Waxay intaa ku dartay in ragga badankoodu ay ugu soo dhowaadaan dumarka magaca jaceyl ama guur laakiin aakhirka lagala kulmo khiyaano sida ay sheegtay.@Bbc Somali
Previous articleSomaliland: dhimashada kiisaska cusub ee Corona Virus
Next articleXogta: maxay Yurub ka faaiiday xubinimada Turkiga ee Nato?
Muxuu Sucuudigu uga adkaan waayay Xuutiyiinta?